निषेधाज्ञामा स्वयम्भू ‘डेटिङ’मा जाने जोडि पूजा गर्न गएको, निषेधाज्ञा उल्लंघन नभएको निष्कर्ष « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर स्वयम्भू डाँडामा ‘डेटिङ’ गएका सरकारी कर्मचारी दुवैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोधेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । निषेधाज्ञामा स्वयम्भूको डाँडामा प्रेमालाप गरेर भाइरल बनेका दुवैले आफूहरु पूजा गर्न गएको स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
सहायक सिडिओ भट्टले न्यूज २४ नेपालसँगको कुराकानीमा पास लिएर हिँडेको देखिएको र कारबाहीलगायत विषयमा मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘पास लिएरै हिँडेको थियो । र, थप कारबाही गर्ने नगर्नेबारेमा मन्त्रालयलाई नै पत्राचार गरिएको छ । अब, यस विषयमा अख्तियारलाई पनि अधिकार हुन्छ ।’
समितिका एक सदस्यका अुनसार श्रेष्ठले चलाएको प्रदेश ३–०१–००२ झ ४९२२ नम्बरको सरकारी गाडीको पास सहरी योजनाका विभागीय प्रमुखले दिएको पाइएकाले निषेधाज्ञा उल्लघन नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रशासनले सोधेको स्पष्टीकरणमा उनले के जवाफ दिए भन्नेबारे सहायक सिडिओ भट्टले बताएनन् । उनी नेतृत्वले उक्त घटनाको बारेमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि समग्र विषयबारे भन्न हिच्किचाए । उनले भने, ‘यस विषय सबै कुरा भन्न मिल्दैन । मलाईभन्दा पनि सूचना अधिकारीलाई सोध्नुहोला ।’
निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हिँड्ने कर्मचारीमाथि कारबाही त गर्नुपर्ने होइन र भनेर पुनः प्रश्न गर्दा उनले मन्त्रालयलाई नै पत्रचार गरिएको उनले बताए ।
घटनाबारे विस्तृत रुपमा जानकारी नदिएका सहायक सिडिओमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । जबकि निषेधाज्ञामा काम न बेकाम सरकारी गाडी लिएर डेटिङमा जाने कर्मचारीमाथि नियम उल्लंघन नभएको र पास लिएरै हिँडेको भनेका सहायक सिडिओले त बचाएनन् ? अहिले थप कारबाहीलगायत सबै जिम्मा मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
तर, अझैँ कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवालमा सिडिओ कार्यालयले निषेधाज्ञा उल्लंघन नगरेको भनेको अवस्थामा मन्त्रालयले कारबाही गर्ला त ?
तस्वीर : छाँयाचन्द्र भण्डारी